NFC: Isgaarsiinta iyo Suuqgeynta Agagaa
Muuqaalka moobiilku si isdaba-joog ah ayuu isu beddelayaa, oo kaliya suuqleyda la socda isbeddelada kuna daraya istiraatiijiyadooda dhiirrigelinta iyo ka-qaybgalka waxay fursad u leeyihiin inay ku guuleystaan ​​adduunkan maanta ee aadka u tartamaya.
Tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay ee ka dhigtay wax weyn waa Isgaarsiinta Field Field (NFC).
Waa Maxay Isgaarsiinta Goobta?
Agagaarka Isgaadhsiinta Goobtu waa tiknoolajiyad ku duugan aaladihii ugu dambeeyay ee mobilada oo u oggolaanaya isgaarsiinta sugan (oo leh xaqiijin) inta u dhexeysa aaladda moobaylka iyo qalabka gudbinta. NFC waxay u oggolaaneysaa martida inay si qoto dheer u milicsadaan, si ay u daawadaan warbaahinta hodanka ah ee loo habeeyay, ay u helaan dalabyo gaar ah oo la bartilmaameedsaday, la wadaago khibradaha iyo tan ugu muhiimsan, inay wax ka iibsadaan, dhammaantood iyagoo adeegsanaya taleefannadooda casriga ah.
NFC waa horumar ballaaran oo ku saabsan xeerarka QR. Xeerarka QR waxay u baahdeen soo degsiinta barnaamijka iyo soo gelinta koodhka baarka si loo helo waxyaabaha ka baxsan bogga internetka. NFC waxay u oggolaaneysaa isticmaaleyaasha mobilada inay helaan nuxur hodan ah isla markaana si muuqata ula falgalaan astaanta. Dhamaan isticmaalaha waa inuu sameeyaa waa inuu ku dhejiyaa taleefanka casriga ah wax kasta oo dhejis ah oo ku xiran RFID, xayeysiiska majaladda, barta tafaariiqda ee iibka ama shey kale oo xayeysiin ah, si loo helo marin deg deg ah oo loogu talagalay adduunka warbaahinta iyo waxyaabaha hodanka ah.
Suuqgeeye, tani macnaheedu maahan kaliya isku xirnaanshaha iyo kaqeybgalka martida si ka wanaagsan, laakiin fursad ay sidoo kale ku qabato dabeecadaha booqdayaasha iyo dookhyada waqtiga dhabta ah ee dunida dhabta ah. Xaqiiqda ah in tiknoolajiyaddani ay sidoo kale la midoobeyso dhiirrigelinta barta iibka, sidaas awgeedna u oggolaaneysa martida xiiseyneysa inay wax iibsadaan isla markiiba waxay ka dhigi kartaa tan quduuska ah ee suuqgeynta maalmaha soo socda.
Tiknoolajiyada NFC waxaa loo isticmaali karaa aqoonsiga, tigidhada, waqtiga iyo xaadiritaanka, daacadnimada iyo barnaamijyada xubinnimada, marin u helitaan sugan (muuqaal ahaan ama qalab ahaan) ama adeegsiga gaadiidka - marka lagu daro habka lacag bixinta. Sida aan ula soconno dariiqyada iyo waxqabadyada khadka tooska ah, goobta ayaa awood u yeelan doonta in lala socdo jidadka iyo waxqabadyada qadka ka baxsan - laga yaabee in la dhaliyo oo lagu abaalmariyo habdhaqanka isticmaaleyaashooda NFC. Thinaire wuxuu bixiyay fiidiyowgan oo ka hadlaya qaar ka mid ah siyaabaha dheeriga ah ee shirkadaha uga faa'iideysan karaan tikniyoolajiyadda:
Google waxay durba bilowday Google Android oo leh awooda NFC, qofkasta oo kale oo mobilada waawaynna wuu raacay ama wuxuu kudhawaaqay NFC isbadal mustaqbalka dhow.
Haddii aad leedahay Google Android taasi waa NFC karti leh, booqo Google Android dukaanka. Haddii aad tahay horumariye, Google ayaa sii daayay faahfaahintaan fiidiyowga NFC horumarinta.
Download Isgaarsiinta Goobta ee Dhimashada si aad ugu fiirsato NFC. Ogow:
Maxay macaamiishu raadinayaan maanta, gaar ahaan kuwa millennials-ka si adag loo fahmi karo
Sida loo farsameeyo waaya-aragnimada moobiilka iyo ololayaasha suuqgeynta si loo wado dakhliga iyo daacadnimada sumcadda
Kiisaska isticmaalkee ayaa si aad ah uga faa'iideysta aqoonsiyada alaabta dhijitaalka ah iyo baakadaha casriga ah
Sidee hirgelinta saxda ah u hagaajin kartaa daacadnimada sumcadda iyo wadista ganacsiga moobiilka
Sida loo isticmaalo kartida u-habeynta daruurta si ay ugu suurta gasho suuq-geynta macnaha guud ee gaara macaamiisha cusub isla markaana ka dhiga macaamiisha hadda faraxsan
Sida loo bilaabo ololahaaga omnichannel adiga oo isticmaalaya NFC farsamo ahaan xarunta dhexe
Soo Degso Isgaadhsiinta Goobta Dhowaan
Tags: helitaankaimaanshahalacag la'aangoogle androidjeebka googleaqoonsigaloginka shaqeynta lacag-bixinta moobilkalacag bixinta mobiladatechnology mobiledhow isgaarsiinta goobtaNfcbarta iibkahelitaanka aaminka ahammaankalacagaha casriga ahkhafiifsanticketingwaqtiga iyo xaadiritaanka
Qalooca Gawaarida Gawaarida ee Moobilka Isticmaalka Isticmaalka Moobaylka